Location: musha » Kutumira » Culinary » Chikafu Chikuru cheSeafood Dish: Hove Inobhururuka uye Cou Cou kubva kuBarbados
Mufananidzo unotsigirwa neCooking&Cocktails
Inofungidzirwa sendiro yenyika yeBarbados, Flying Hove uye Cou Cou ndiyo yakanakisa nzira yekuyedza yevanoda chikafu chegungwa. Hove chena dzine muto, dzine muto, uye dzakarungwa zvakanaka dzinopihwa necou cou, chikafu chechibage cheBarbadian. Wagadzirira kudzidza kugadzira iyi dish yeBarbadian kumba?
Maitiro Ekugadzira Hove Inobhururuka uye Cou Cou?
Zvokudya zveBarbados ibhodhoro rakanaka rinonyunguduka rezvinwiwa zvakasarudzika zvinosanganisa pesvedzero kubva kuEngland, India, uye Africa kugadzira zvinoshamisa, zvakasiyana siyana.
Vabiki veBajan vanoshandisa yakanaka yakawanda yezvigadzirwa zvemuno kugadzira zvimwe zvinonaka kwazvo pasi rose. Zvokudya zveBajan zvaungasangana nazvo pachitsuwa zvinosanganisira macaroni pie, makeke ehove, mupunga nepizi, conkies, coconut turnovers, uye zvechokwadi Barbados national dish flying fish and cou cou.
Zvisinei nendiro dzakawanda dzinoshamisa muBarbados, nhasi tichangotaura mabikirwo ehove dzinobhururuka uye cou cou nekuti kana paine imwe Bajan dish yausingade kupotsa, ndeiyi!
Chikafu chenyika cheBarbados chikafu chinonaka uye icho vanhu veko vanodada nacho.
Nyeredzi yeshoo fillet yehove inobhururuka kana yakakangwa, inoperekedzwa nedivi recou cou, inoyeuchidza polenta kana grits, kune avo vasina ruzivo nezve cuisine. Muto weLime, zvinonhuwira uye mavheji matsva anotora zvinonaka kusvika kumusoro, zvichigadzira kudya kwakanaka, kwechokwadi kweBajan.
Kana iwe uchizoshanyira Barbados munguva pfupi, zviri nani kukuunzira chido. Tichakuudza zvimwe nezvendiro munguva shoma, asi chekutanga, heino mamwe mamiriro.
Chii chinonzi Flying Fish?
Hove dzinobhururuka imhando yehove dzinobva kuchitsuwa cheBarbados. Kutaura idi, hove dzacho dzaichimbova dzakawanda kwazvo mumvura dzechitsuwa chacho zvokuti Barbados yave ichinzi “nyika yehove dzinobhururuka.” Saka, hazvishamisi kuti hove dzinobhururuka ndicho chinhu chikuru cheBajan national dish.
Hove dzinobhururuka dzakakosha kune vanhu veBajan zvekuti uchaona chiratidzo chinoratidza hove inobhururuka pamari yenyika, uye inotoratidzwa muchiratidzo cheBarbados Tourism Authority.
Iwe uchiri kuwana hove dzinobhururuka pamamenu mumaresitorendi mhiri kwechitsuwa. Hove dzinobhururuka dzinonaka zvakabikwa zviri nyore, nekupisa ne acidic lime juice, uye inofadzawo yakakangwa. Enda kuBajan hove fry kuti uedze chinyakare chehove dzinobhururuka resipi inopihwa nevagari veko.
Chii chinonzi Cou Cou?
Cou cou idhishi iwe uchawana yakawanda muBarbados, asi haina kunyanya kuwanda kune dzimwe nyika. Kana usati wambozviedza kare, fungidzira chimwe chinhu chakafanana nepolenta kana grits mukugadzirwa.
Yakagadzirwa kubva musanganiswa wechibage uye okra. Izvo zviviri zvinosanganisa zvinosanganisa kuita rudzi rweporridge inonaka. Cou cou muBarbados ndiro inodziya uye inonyaradza inoenda zvakakwana nemimwe spicier Bajan ndiro - sehove dzinobhururuka! Zvinoshamisa zvakare nemasosi anonhuwira, ayo aunowana akawanda muBajan cuisine.
Kazhinji, cou cou inoshumirwa nenzira yechinyakare, iri nekuigadzira kuita oval shape, uchishandisa enamel ndiro. Kana kuti, kana uchida kunyatsova wechokwadi, unoshandisa goko re calabash, kubva pamuchero wemuti unowanikwa uchikura musango munzvimbo dzinopisa neAmerica. Cou cou inogonawo kugadzirwa kubva kune zvimwe zvinongedzo, sechingwa, mayam kana mabhanana egirinhi.
Hove Inobhururuka uye Cou Cou Recipe
Sechinyakare, vanhu veBajan vanobika iyi resipi neChishanu kana Mugovera, asi chokwadi kana iwe ukadzidza kugadzira yako unogona kushandira iyo pese paunoda! Fambisa shamwari dzako nemhuri nekuravira kunonaka kwenzvimbo dzinopisa. Heino maitiro ekuita.
4 mafiritsi ehove dzinobhururuka (kana izvi zvisipo kwaunogara, unogona kutsiva sea bass)
Muto we lime
Pinch yegarlic powder
3 chitubu hanyanisi
1 tsp ginger itsva
1 tbsp yemashizha e thyme
1/2 tsp yakasanganiswa zvinonhuwira
100 ml vhiniga
5 g yetimu
10 g ye curry powder
5 g yehupfu hwegoriki
6 tbsp yemafuta emuorivhi
Kune cou cou:
Kutanga gadzira zvinonhuwira. Sanganisa zvese zvinongedzo zvekurunga, kunze kwevhiniga, muchikafu chekudya uye kupuruzira kusvika zvanyatsobatanidzwa. Isa paste muchirongo chinovharika uye wobva wawedzera vhiniga. Kuzunungusa zvakanaka uye mwaka maererano nezvaunoda. Iwe unozoda kusiya izvi kweanenge maawa maviri usati waishandisa, saka isa izvi parutivi kuti upise.
Runza hove ne lime, munyu uye mhiripiri.
Isa zviyo zvemuto mugango remuto uye uuye kuzopisa, nemafuta mashoma. Wedzera chipunu chimwe chezviyo zvawakagadzira kare.
Mune imwe pani, sanganisa zvinoshandiswa zve cou cou, kunze kwehupfu hwezviyo, uye uuye kumota. Unozoda izvi pakupisa kukuru. Kana yaibva, simbisa musanganiswa uye urase hanyanisi ne thyme. Chengetedza zvidimbu zveokra kuti ushandise gare gare.
Dzorera cou cou pan pamoto woisa hupfu, sanganisa zvakanaka kusvika waita musanganiswa wakakora. Wedzera mu okra.
Iyo ndiro yakagadzirira kushumira! Isa cou cou mundiro uye pamusoro pendiro imwe neimwe ine fillet yehove uye ine hutano inobatsira yemuto uye unakirwe kuravira kwako kweBarbados! Kana kuti zvimwe, tora rwendo kuenda kuparadhiso iyi yechitsuwa inofadza.
Kururamisira Sandals Resorts Bharabhasi
Nzira yakanakisa yekuravira maitiro eBarbados ndeyekushanyira New Republic yeBarbados!
Mamwe mashoko pamusoro peBarbados
Africa Barbados Sandals Resorts ushanyi